सङ्क्रमितहरु संस्थागत आइसोलेशनमा बस्नै मान्दैनन् ! - Dainik Online Dainik Online
सङ्क्रमितहरु संस्थागत आइसोलेशनमा बस्नै मान्दैनन् !
भारतसँग सीमा जोडिएको जिल्ला बैतडीमा पनि देशका अन्य जिल्लाहरुमा जस्तै कोरोना सङ्क्रमणको दोस्रो लहर तीव्र रुपमा फैलदै गएको छ । यसरी सङ्क्रमितहरु दिन प्रतिदिन बढिरहेका भएपनि स्वास्थ्य क्षेत्रको प्रबन्ध मिलाउने सम्बन्धित निकायको तयारी भने त्यति प्रभावकारी छैन ।
याहाँको अर्को समस्या के छ भने स्थानीय तहहरुले संस्थागत आइसोलेशन स्थापना गरेका भएपनि सङ्क्रमितहरु त्यहाँ बस्न मान्दैनन् । उनीहरु यसरी संस्थागत आइसोलेशनमा बस्न नमान्दा झनै समस्या भएको स्वास्थ्य अधिकारीहरुको बुझाई छ । यसरी निर्माण गरिएका आइसोलेसन रित्तै छन्, तर सङ्क्रमित भने घरघरमै छन् ।
कोरोना सङ्क्रमितहरु पनि अधिकांश घरमै रहेकाले पनि कोरोना सङ्क्रमण झन् तीव्र रुपमा फैलिइरहेको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ । सङ्क्रमितहरु संस्थागत आइसोलेशनमा बस्न नमान्दा सङ्क्रमणको दर बढ्दै गएको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख योगेशप्रसाद भट्टले बताउनुभयो । स्थानीय तहहरुले आइसोलेशन निर्माण गर्न ढिलाई गरेका छन् उहाँले भन्नुभयो, “निर्माण गरिएका आइसोलेशनमा पनि सङ्क्रमित नबस्दा जोखिम बढाएको छ । उता घरमा बसेका सङ्क्रमितले पनि होम आइसोलेशनको नियम पालना नगर्दा घरपरिवार र गाउँघरमा सङ्क्रमण बढेको देखिएको छ ।”
सक्रिय सङ्क्रमितमध्ये हाल एक सय १५ जना मात्रै संस्थागत आइसोलेशनमा रहेका छन् र अन्य सबै होम आइसोलेशन तथा घरमै रहेका स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ ।
स्थानीय तहहरुले आइसोलेसन निर्माण गर्न शुरु गरेका भएपनि आइसोलेशनमा बस्ने सङ्क्रमितको सङ्ख्या भने न्यून रहेको छ । स्थानीय तहले त्यहाँ बस्ने सङ्क्रमितको व्यवस्थापनमा चासो नदिँदा बस्न नमान्ने गरेका प्रमुख भट्टले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय तहहरुले आइसोलेशन मात्रै निर्माण गरे त्यहाँ बस्ने सङ्क्रमितको बसाई तथा खानपिनको व्यवस्थामा ध्यान दिएका छैनन्, यसकारण पनि सङ्क्रमितहरु बस्न मानिरहेका छैनन् ।”
अस्पतालमा १९ ओटा मात्रै सिलिण्डर रहेका र ती सिलिण्डर सङ्क्रमितको उपचारका लागि निकै कम भएको जनाइएको छ । अस्पतालमा रहेका सिलिण्डरले मात्रै सङ्क्रमितको उपचारका लागि निकै समस्या हुने गरेको जिल्ला अस्पताल बैतडीका प्रमुख डाक्टर वसन्तराज जोशीले जानकारी दिनुभयो । अस्पतालमा रहेका १९ सिलिण्डरमध्ये पनि आठओटा भर्नका लागि धनगढी पठाइएको भएपनि त्यहाँ रहेको ग्याँस उद्योग बिग्रिदा झनै समस्या भएको छ । डाक्टर जोशीले भन्नुभयोे, “अस्पतालमा सङ्क्रमितहरु दिन प्रतिदिन बढ्दै गएका छन्, थप सङ्क्रमितलाई भर्ना गर्न सकिने अवस्था छैन ।”
गत मङ्सिरमा प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको सहयोगमा जडान गरिएको भेन्टिलेटर मेसिन दक्ष जनशक्तिको अभावमा हालसम्म पनि सञ्चालनमा आउन सकेको थिएन् ।
प्रदेश सरकारको आग्रहमा भेन्टिलेटर मेसिन फिर्ता गर्न लागेका जिल्ला अस्पताल बैतडीका प्रमुख डा।वसन्तराज जोशीले जानकारी दिनुभयोख। उहाँले भन्नुभयो,“दक्ष जनशक्तिको अभावमा भेन्टिलेटर सञ्चालनमा नआएकाले प्रदेश सरकारको आग्रहमा दक्ष जनशक्ति भएका ठाउँमा भेन्टिलेटर मेसिन फिर्ता गर्दैछौं, हाम्रो अस्पतालमा भेन्टिलेटर सञ्चालन गर्ने जनशक्ति छैनन् । त्यसैैले जनशक्ति भएका ठाउँका लागि मेसिन फिर्ता पठाउँदैछौं ।”
जिल्लाका १० ओटै स्थानीय तहमा हालसम्म १८ स्थानमा आइसोलेशन सेन्टर स्थापना भइसकेको स्वास्थ्य कार्यालय बैतडीका प्रमुख योगेशप्रसाद भट्टले जानकारी दिनुभयो । भारतसँग सीमा जोडिएको झुलाघाट नाकामा हेल्थ डेस्क स्थापना भइसकेको छ भने जिल्लाका १० ओटै स्थानीय तहका विभिन्न ठाउँमा कोरोना सङ्क्रमितहरुलाई राख्नका लागि आइसोलेशन सेन्टर सञ्चालनमा आएका हुन् । स्वास्थ्य प्रमुुख भट्टले भन्नुभयो,“ जिल्लाका १८ ठाउँमा दुई सय ५६ शय्याका आइसोलेशन सेन्टर तयार भएका छन्, आइसोलेशन निर्माण गरिएका भएपनि बस्ने सङ्क्रमित सङ्ख्या न्यून छ ।”
नगरपालिकासँग रहेको एम्बुलेन्स गत वर्ष दुर्घटनामा परेको र मर्मत नहुने भएपछि नगरपालिकाले नयाँ एम्बुलेन्स खरिदको प्रक्रिया पनि अघि बढाएको जनाएको छ
कोरोना महामारीका बेला नगरबासीलाई समस्या नहोस भनेर तत्कालका लागि दुईओटा जिप भाडामा लिएको छ ।
यहाँका स्थानीय तह, जिल्ला अस्पताल र शहिद दशरथचन्द स्मृति प्रतिष्ठानको समेत गरी एम्बुलेन्स तयारी अवस्थामा राखिएको हो ।
कोरोना सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जेठ २ गतेसम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी गरिसकेको छ ।
निषेधाज्ञाको अवधिभर अति आवश्यक काम बाहेक घरबाहिर ननिस्कन प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेन्द्रदेव पाण्डेले अनुरोध गर्नुभएको छ ।
साथै खाद्यान्न, फलफूल तथा तरकारीका पसल बिहान ७ देखि १० बजेसम्म खुल्ला गर्न, भिडभाड हुने खालका कुनै पनि गतिविधि नगर्न र अनिवार्य रुपमा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालन गर्न सबै जिल्लाबासीलाई आग्रह गरिएको छ ।